သာထက်အောင် ● ဖက်မှာလားမောင်ရဲ့… ကြောက်တယ်ရှင် | MoeMaKa Burmese News & Media
2 Responses to သာထက်အောင် ● ဖက်မှာလားမောင်ရဲ့… ကြောက်တယ်ရှင်
Ba Ba Gyi on May 14, 2016 at 5:44 pm
ကောင်းလိုက်တဲ့ဆောင်းပါး။ ရေးပြလိုက်တာတွေက တကဲ့အမှန်တရားဘဲ။
Catwoman on May 15, 2016 at 4:13 am
Very true saya. I lived here in the us for almost thirty years so I understand where you re coming from. I came here when I was 17. I might not admit it back then but it must have beenacultural shock. Luckily education helped me where I m today.